वकिलले नै भने – ‘कारको ८ लाख कर बुद्ध लामाले होइन, एपि वनले नै तिर्नुपर्छ, एपि वनले गलत गर्यो’ | Rajmarga
नेपाल आइडलका बिजेता बुद्ध लामाले अहिले सम्म पुरस्कार नपाएको भन्दै एउटा अडियो सार्वजनिक भएपछी अहिले सामाजिक संजाल नराम्ररी तातेको छ । बुद्धको अडियो सार्वजनिक भएपछी नेपाल आइडलको आयोजक एपि वन टेलिभिजनले बुद्ध लाई दिइएको कार को नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने कर बुद्ध स्यमंले तिर्नुपर्ने आशयको जवाफ पनि दिइसकेको छ । अब पुरस्कार स्वरुप पाएको सामानको कर पुरस्कार दिनेले तिर्ने हो कि पुरस्कार लिनेले तिर्ने हो ?
भन्ने बिषय नै मुख्य भयो । यसबारेमा यहाँ नानाथरी तर्क गरेर बस्नुभन्दा कानुनमा के ब्यबस्था छ भनेर खोज्नु नै उचित हुन्छ । त्यसैले यस बिषयमा कानुनले के भनेको छ भन्ने बिषयमा नेपालका चर्चित अधिबक्ता सुरेन्द्र थापा मगर संग एउटा बिशेष अन्तरवार्ता गरीएको छ । उनका अनुसार कानुनमा पुरस्कार पाउने ब्यक्तिले नै उक्त पुरस्कारको कर सरकारलाई तिर्नुपर्ने ब्यबस्था छ ।
यसको मतलब कारको कर बुद्ध ले तिर्नुपर्छ । तर उनले कारको कर बुद्धले तिर्नुपर्ने भनेर बताएनन । उनले त उक्त कारको कर एपि वन टेलिभिजनले तिर्नुपर्ने बताएका छन । कानुनमा एउटा प्राबधान हुदा हुदै पनि एउटा वकिलले किन एपि वन ले नै उक्त पुरस्कारको कर तिर्नु पर्ने किन बताए ? यो बिषय निकै महत्वपुर्ण छ । यो सनसनी पुर्ण अन्तरवार्ता हेर्नुहोस :
Previous post: शवगृहमा राखिएको शव अचानक ब्युँतिएपछि…
Next post: श्रीमती बिहान अबेरसम्म सुतेपछि श्रीमानले उठाए आश्चर्यजनक कदम